Ngwaọrụ PlexEarth 2.0 Beta Dị - Geofumadas
Mee, 2010 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, Video
Otu ụbọchị gara aga Agwara m ha okwu nke akwụkwọ ndị ahụ na 2.0 version nke PlexEarth Tools maka AutoCAD ga-eweta, otu n'ime mmemme kachasị dị irè nke m hụrụ na Google Earth n'akụkụ akụkụ nke onye ọrụ AutoDesk Developer Network (ADN). Taa, a tọhapụrụ bọtịnụ Beta, ị nwere ike ibudata, nwalee na ihe dị mkpa na usoro ndị a: akụkọ ga-ekwe omume chinchi.
Kedu ihe dị ọhụrụ na nke a
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ụdị Beta a bụ n'efu ebe a na-ewepụta ụdị azụmaahịa, -ihe dịka a gwara m- na mbido June 2010. Onye ọ bụla dara ụra agaghị enwe ike ibudata ya.
Nke kachasị mma iji tụnyere ihe m hụrụ ụbọchị ole na ole gara aga: Ugbu a ọ dị na Spanish na asụsụ ndị ọzọ nke AutoCAD na-akwado dịka:
N'ezie, ụdị a anaghị agba ọsọ na AutoCAD 2009 ma ọ bụ tupu, mana na 2010 na 2011. Ọ na-arụ ọrụ na:
Ụlọ ọrụ AutoCAD® 2010-2011Ahịa na ikikereAmaghị m ọnụahịa nke akwụkwọ ikike, anyị ga-ama nke ahụ rue ọnwa Juun. Ihe m maara bụ na ọ gaghị abụ naanị otu ụdị ikikere, mana a ga-edozi Pro na adịchaghị mma, nke dị m mma ka m bulie ọnụ ahịa. Agwara m otu onye n'ime ndị okike ya, na ha ga-eme ọnụego pụrụ iche nye ndị na-ebudata ụdị Beta ma debanye aha ya.
Ihe Pro: Nke a ga-agụnye atụmatụ nke mmekọrịta na Google Earth oyiyi, ihe ndị ahụ ruo ugbu a amaghị m ihe ọzọ ngwa igosi nke ọma:
Mepụta ihe oyiyi, ma ọ bụ n'elu mpaghara akụkụ anọ, n'ime otu polygon ma ọ bụ na ụzọ.
Mbupu mbubata dị ka ihe n'otu n'otu, na ntinye nke saịtị.
Ihe oyiyi eserese na mbubata na AutoCAD gaa Google Earth.
Bufee ihe gaa Google Earth.
Zipụ isi ihe AutoCAD, polygons ma ọ bụ ụzọ nwere Google Earth na ndabere.
Leba anya na Google Earth, site na nhọrọ ntinye, iji dakwasi na dwg.
Enwere mmasị m site na nsụgharị nke nsụgharị a, ebe ọ bụ ugbu a, ọ ga-ekwe omume ibudata mbido na mosaic ma ọ bụ dabere na polygon.
El video nyere na Yutube Ọ bara ezigbo uru, ọ na - egosipụtakwa otu ị ga - esi budata raster maka ụzọ mosaic ma ọ bụ n'okporo ụzọ (ụzọ).
Ụdị nke kachasị elu: Na nke a, a ga-agbakwunye ọrụ nke dijitalụ, ọbụnakwa na ọ bụrụ na ya na ụdị nke AutoCAD, PlexEarth Tools na-agbakwụnye ọrụ ndị a na-eme naanị site na Civil3D.
Mbubata ala na uzo n 'ndokwa ndepụta)
Mepụta ala, nke a site na isi ihe, nsụgharị ma ọ bụ ihe odide elu.
Nchịkọta mpịakọta n'etiti etiti
Agba ọsọ, dịka na Civil3D
Nyefee elevations ka ịsị ma mepụta 3D polylines tinyere ụzọ.
Oghere ederede larịị, akụkụ ma ọ bụ mpịakọta elu.
Ọ nwekwara ngwá ọrụ iji gụọ ihe ndọda ma ọ bụ ozi elu, yana nhazi oge ma ọ bụ nke dị anya.
Uzo abuo a nwere ike ibuputa site na Google Earth, ma o bu usoro ozo, dika Civil3D.
Isiokwu a na-ekwu banyere ozi sitere na PlexEarth 2.5
Previous Post«Previous PowerCivil maka Latin America, mmetụta mbụ
Next Post Ule Ngwunye Skiakia SET 630RKNext »
4 Azịza ya na "PlexEarth Ngwaọrụ 2.0 Beta Dị"
Juan Carlos Pineda kwuru, sị:
Nnukwu onyinye, karịsịa maka nchọpụta mbụ
Ehee ee, o bia na ntuziaka gi. Agbanyeghị na nke a bụ ụdị Beta, nke ikpeazụ abịabeghị.
A ga-enwe akwụkwọ ntuziaka maka ngwá ọrụ a
Beta dịkwa maka bọtịnụ AutoCAD 2010 na 2011 64.